Cameron.....: November 2018
Joox က နေ့စဉ် notification လေးတွေတက်တက်လာတတ်တယ်...။ ဒီနေ့ဘာသီချင်းလေးတွေနားထောင် ဘယ်သူ့သီချင်းဟာဖြင့် အသစ်ထွက်တာ စသဖြင့် ဖုန်းမှာပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်...။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်သုံးရက်က ခရီးထွက်တဲ့သူများတာမို့ ခရီးသွားသီချင်းများဆိုပြီး တက်လာတော့ နှိပ်ကြည့်လိုက်တာ ခရီးသွားနေသူတွေ အဝေးရောက်သူတွေအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေ ဆယ်ပုဒ်လောက် တင်ထားပေးတာတွေ့လို့ Solo ရဲလေး ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ ဇေရဲတို့ Rapping လိုက်ထားတဲ့ ဇေရဲရဲ့ “လေးစားမှု”ဆိုတဲ့ အမ်ဘမ်ထဲက “သတိရညနေခင်း”ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ နားထောင်ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ ဇေရဲဆိုတာလည်း ကျွန်မဖြင့်တခါမှ မသိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော် ခုမှ Joox ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လို့ သိရတာ...။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဘန်ကောက်ကိုခရီးသွားနေတော့ လမ်းမှာ နားထောင်ဖြစ်နေခဲ့တာ..။
လူတိုင်းမှာ အမှတ်ရစရာ သတိရစရာညနေခင်းတွေ အများကြီးမဟုတ်ရင်တောင် ညနေခင်း တစ်ခုတော့ ရှိခဲ့ဖူးကြမှာပါ.... ။
Posted by Cameron at 16:24 No comments:
ကျွန်တော့်အတွက် မီက ပျော့ခွေကျလာတဲ့တွယ်ရာမဲ့မီ၊ သနားစရာမီ (သော်ဆွေ)
အတိုက်ခိုက်အဝေဖန်ခံရတဲ့ “မီ”က တတိယပတ်ရောက်တဲ့အထိ ရုံပြည့်ပါပဲ...။ ကြည့်တဲ့သူအားလုံးက ဇာတ်လမ်းထဲကိုမျောနေကြတယ် တစ်ရုံလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြတယ်...။ ကျွန်မဘေးနားက မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ သူ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူလာကြည့်တာ အပျိုပေါက်ကလေးနှစ်ယောက်က ရုပ်ရှင်ထဲနှစ်မျောသလောက် မအေလုပ်သူက ဖုန်းဖွင့် ဖဘပွတ်နေတယ်..။ ဖုန်းအလင်းရောင်ကြောင့်ရယ် ရုပ်ရှင်ကို လက်မှတ်ဖိုး အကုန်ခံပြီး ပိတ်ကားကိုမကြည့်တာ စော်ကားခြင်းတစ်မျိုးပဲ..။ ကျွန်မစိတ်နဲ့ဆို အဲဒီမိန်းမကို ရုံထဲက ထွက်သွားခိုင်းမိမယ်...။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကို အေးဆေးနဲ့ကောင်းကောင်း ကြည့်ချင်တာတောင်မှ အနှောက်က၀င်သေးတာအဲလို..။ “မီ” က အစအဆုံး ဆရာမကြီးကြည်အေးရဲ့ စာအုပ်ထဲကအတိုင်း ဒိုင်ယာလော့ကအစ ၉၉%လောက်ကို မပြင်ဆင်ဘဲယူထားတယ်..။ Setting နဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို သေချာမလစ်ဟင်းအောင်လုပ်ထားတယ်...။ ဇာတ်က အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ မရှိသလောက် ရေစီးချောင်းတစ်ခုလိုပဲတပြေးထဲသွားတယ်...။ ပိုင်ဖြိုးသုက လုံးဝ “မီ”ရဲ့ ကာရိုက်တာကို လိုက်မှီတယ်...။ သရုပ်ဆောင်အားလုံး သူ့နေရာနဲ့သူ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိကျကျ သရုပ်ဆောင်သွားတာ တွေ့ရတယ်..။ ဒါရိုက်တာဏကြီးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိမှတ်ပြုတယ်..။
“မီ” ကိုရုံမတင်ကတည်းက ကြည့်ဖို့တေးထားပေမယ့် တကယ်တမ်း ရုံမှာလက်မှတ် သွားဝယ်ကြည့်ဖြစ်တာက “ကြတ်ဂူ”....။ ပြီးတော့မှ “မီ”ကို လပြည့်နေ့မှာကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ကြိုတင် ၀ယ်ထားလိုက်တယ်...။ “မီ”က ရုံတင်ပြီး တစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာပဲ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရတယ်...။ ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အမြင်ကျယ်ရမယ့်နေရမှာမကျယ်ကြဘူး အဲဒါတော်တော်ခက်တယ်...။ ဒီလောက်ခေတ်မှီတိုးတာနေတဲ့အချိန်မှာ တခါတခါကျ ဟိုး ရှေးခေတ်ဆွဲကြီးတွေ အယူသည်းလိုသည်းနဲ့..။ ပြောင်းလဲပြီ ပြောင်းလဲပြီဆိုပြီး ဘောင်ထဲမှာနေနေကြသူတွေက တပုံကြီးရယ်...။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို တိုးတက်ဖို့က အဲဒီလူတစ်ယောက်ချင်းဆီနဲ့လုံးဝကိုသက်ဆိုင်နေပါတယ်..။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်က ဒီဘောင်ထဲကနေထွက်မလာသေးသရွေ့တော့ တိုးတက်ဖို့ လမ်းက စမ်းတ၀ါးဝါးနေမယ်..။ ဒါတွေခနထားပါ...။ “မီ”နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုက ကျန်းမာရေးသံသမန်မို့လို့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရတော့ဘူးလား...။ ဒီကားထဲမှာကရော စီးကရက်သောက်တာ လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်သိပ်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး စီးကရက်ကို ကြော်ငြာပေးနေလို့လား...။ မီကိုယ်တိုင်တောင် စီးကရက်ကြောင့် အဆုတ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်ပါလို့ မူရင်း ၀တ္ထုရေးတဲ့ ဆရာမကြီးကြည်အေးကိုယ်တိုင် ရေးထားပြီးသားလေ...။ ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီး ဒီလောက်လေးတောင် မစဉ်းစားတတ်ကြတော့လောက်အောင် ဦးနှောက်တွေက ဘာစားပြီးအသက်ရှင်နေကြသလဲ မသိတော့ပါဘူး...။ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Team တစ်ခု လူတစ်ယောက်ကို အောက်ပြုတ်ကျအောင် စိတ်ဓါတ်ပြိုလဲအောင်လုပ်ရတာ ထမင်းစားရေသောက် တစ်ခုလို ဖြစ်နေကြတာကို မြင်နေရတော့ သိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်...။
“ကြတ်ဂူ”ရဲ့ ရာဇ၀င်တစွန်းတစကို ဟိုးနှစ်တွေကတည်းက ကြားဖူးနေတော့ လွိုင်ကော်ကိုလည်း မရောက်ရောက်အောင်သွားလည်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်...။ အဲဒီကတည်းက ကိုလူမင်း ကြတ်ဂူဇာတ်ကား ရိုက်နေတာလည်းကြားတယ်...။ ရုံတင်ရင်သွားကြည့်မယ်လို့တော့ စိတ်မကူးထားပေမယ့် ကြည့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ...။ ကြည့်ရတာထိုက်တန်ပါတယ်...။ ဇာတ်ကားလေးရဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် နေရာဒေသ ရိုက်ချက် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျပေးချင်တာတွေအားလုံးကောင်းတယ်...။ ခုနောက်ပိုင်း ကျွန်မတို့ မြန်မာကားတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင် ခီမောင်နှံတို့ရောက်လာကတည်းက တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာကြပါတယ်...။ ရန်ဖြစ် ငြင်းခုံ ဆူညံပွတ်လောရိုက်နေတဲ့ ပေါကားတွေလည်း ရှိနေသေးပေမယ့်.. ဒီလိုဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးတွေကို စီးပွားမဆန်ဘဲ စွန့်စားပြီးရိုက်ပေးနေတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေကို တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်..။ ဒီ“ကြတ်ဂူ” ကားလေးက ကြတ်ဂူလို့ နာမည်ပေးထားပေမယ့် တကယ်ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျက မကောင်းတာလုပ်ရင် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကို ပြန်ပေးဆပ်ရတယ် ဆိုတာကိုပဲ...။ ကိုယ့်မကောင်းမှုလုပ်ရပ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လွဲလို့ လူစားထိုးပြီးခံခိုင်းလို့ မရဘူး ...။ အဲဒီပြကွက်လေးတွေပီပြင်တယ်...။ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုလူမင်း မခိုင်ကြီး မြင့်မြတ် အူဝဲ အားလုံးသူ့နေရာနဲ့သူ ကောင်းကြတယ်..။ Play Back Music လေးတွေ ထည့်ထားတာလည်း သိပ်ကောင်းတယ်...။ ကျွန်မဆို မခိုင်ကြီးက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကတည်းက ချောက်ထဲပြုတ်ကျပြီး ဆုံးသွားတဲ့ သူ့ယောကျာ်းပြန်အလာကို ကြတ်ဂူထဲက အခေါင်းထဲမှာသွားစောင့်အိပ်တော့ သားဖြစ်သူ မြင့်မြတ်နဲ့ ရွာကလူတွေလိုက်ခေါ်ကြတဲ့အခန်း၊ ကိုလူမင်း ပြိတ္တာဘုံဘ၀ကနေ ခနပြန်ရောက်လာပြီး သူ့မိသားစုကို လိုက်ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းတဲ့အခန်းတွေဆို တစ်ရှူးနှစ်ရွက်သုံးရွက်လောက် ကုန်တယ်...။ တစ်ရုံလုံးကျွန်မလို မျက်ရည်ကျမယ့်သူရှိပါ့မလား။ ကျွန်မကရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် စိတ်နှစ်ပြီးကြည့်တတ်လို့ ခံစားလွယ်တယ် မျက်ရည်လွယ်တယ်...။ လာကြည့်ကြတဲ့သူတွေက လူငယ်တွေများတယ်..။ ကြတ်ဂူကို သရဲတစ္ဆေကားနဲ့အမှတ်မှားပြီးလည်း လာကြည့်ကြတာထင်တယ်...။ ရုံပြန်အထွက်မှာ ဟာသကားကြည့်တာမှ ဟုတ်ဦးမယ်လို့ အတွေးတိမ်သူတချို့ရဲ့ တီးတိုးစကားလည်း ကြားရပါရဲ့..။
ကြည့်ခဲ့တဲ့ ကားနှစ်ကားကပုံစံမတူဘူး “မီ”က ကာရိုက်တာကို ဦးစားပေးတဲ့ကား... “ကြတ်ဂူ”ကတော့ သဘာဝတောတောင်ရေမြေအလှနဲ့ ကယားတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ရိုးရာကိုဖွဲ့ပြထားတဲ့ ပညာပေးကား...။
Posted by Cameron at 10:41 No comments:
Last week ago, I went to the plants shop for making in-door plant pot of mother-in-law-tongue for our show flat. So I decided to buy some seeds of tomatoes, bok choy and mint. Thanks to my cousin sister who motivate me for bacony garden at our bacony space as condominium. Bok choy is particularly well suited to container growing because of its compact, shallow root mass.
In the other morning, I scattered the seeds in container at my bacony. I start with the seeds of bok choy. I used organic fertilizer mix from the plant shop where I bought the seeds. The seeds are sprouted on day3(see in the photo). Oh!! whats the feeling when I first see my tiny sprout . I so happy, but I told myself not to get too excited. Actually, I am not-so-capable hands. I takeapeek at my bok-choy everyday.
bok choy sprouted on day 3
I wondering how many days do I wait for harvest those bok-choy?
Afteraweek, they come out like this.........
I think I should buy the extra container for re-pot my bok choy
my ugly jasmine plant
I have not had much luck with jasmine in my bacony garden. Its bloom and then drop off and the leaves are turn to yellow color. I think my plant lacks certain nutrients.
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေက ကျွန်မတို့ရုံးက Condo အရောင်း Show flat အတွက် ပန်းအိုးသုံးလုံးလုပ်ဖို့ မင်းဓမ္မလမ်းပေါ်က ပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်...။ ပန်းအိုးတွေဝယ်ရင်း မျိုးစေ့လေးတွေပါဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးထားပြီးသားမို့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းမျိုးစေ့ တစ်ထုပ်ဆီဝယ်ခဲ့တယ်..။ တကယ်တမ်းကျွန်မက အိမ်မှာနေ့တိုင်းစားဖြစ်တဲ့ ပူစီနံပင်စိုက်ချင်တာ မျိုးစေ့ထုပ်တွေကုန်နေလို့တဲ့ ..။ ရုံးအတွက် ပန်းသုံးအိုးက နှစ်အိုးဆင်တူဝယ်ပြီး ကျန်တစ်အိုးကိုတော့ တခြားပန်းလေးဝယ်ဖြစ်တယ်...။ နဂါးစပ်နှစ်အိုးနဲ့ လပ်ကီးဝါးပင်လေးတစ်အိုး ၀ယ်ခဲ့တယ်..။ တလက်စတည်း အိမ်အတွက် အမေ့အခန်းထဲထည့်ဖို့ လပ်ကီးဝါးပင်လေး တစ်ပင်ဝယ်ခဲ့လိုက်တယ် အိုးကရှိပြီးသားမို့မ၀ယ်တော့ဘူး...။
ကျွန်မ၀မ်းကွဲညီမလေးတစ်ယောက်က သူ့အိမ်ဝရံတာမှာခရမ်းချဉ်သီးပင်တွေ ရုန်းပဒေပင်တွေ စိုက်တော့ ကျွန်မလည်း အိမ်က၀ရံတာမှာ စားပင်လေးတွေ စိုက်ချင်နေခဲ့မိတယ်..။ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းပင်လေးတွေက အိမ်တွင်းစားပင်စိုက်ချင်သူတွေအတွက် ရှည်မျောမျောကော်ခွက်လေးနဲ့ စိုက်ရတာ ပိုသင့်လျော် အဆင်ပြေပါတယ်...။
တမနက်မှာတော့ ကျွန်မ၀ယ်ခဲ့တဲ့ မြေဆွေးအိမ်ထဲက မြေကြီးတွေကို ကော်ခွက်ထဲထည့်ပြီး မုန်ညင်းစေ့လေးတွေကို ကြဲပြီး မြေကြီးပြန်ဖုံး ရေလောင်းထားခဲ့လိုက်တယ်...။ သုံးရက်မြှောက်နေ့မှာတော့ အညှောင့်ပုစိလေးတွေပေါက်လာတာ မြင်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ ဒါပေမယ့် သိပ်တော့မပျော်ရဲဘူး ကျွန်မက အပင်စိုက်တာ လက်သိပ်မဖြစ်ဘူး...။
ကျွန်မ မုန်ညင်းပင်လေးတွေ ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိသေးပေမယ့် ဘယ်နေ့အပင်လေးကို ခူးရမလဲဆိုတာကို ကြိုပြီး ရင်ခုန်နေမိတယ်...။ စားပင်တွေကို ခုမှစစိုက်တော့ ကိုယ့်လက်ကိုသေချာမသိသေးဘူး...။ ကျွန်မ ၀ရံတာမှာ ပထမဦးဆုံးစိုက်ထားတဲ့ စံပါယ်ပန်းပင်ကတော့ ကျွန်မနဲ့ကီးမကိုက်ဘူးထင်ရဲ့ အပင်တွေက မြေသြဇာပဲမကောင်းလို့လား အရွက်တွေက တပင်လုံးဝါပြီး အပွင့်တော့ ပွင့်ရှာပါတယ် ပြီးတော့ ခဏလေးနဲ့ကြွေရော...။
ရွက်လှပင်ကတော့ သန်နေရောပဲ... အိုးပြောင်းဦးမယ် ဒီအိုးက အ၀ကျယ်တော့ ပူစီနံလေးစိုက်မလို့
Posted by Cameron at 10:56 No comments:
Dear Grandpa, I do miss you so much whenever I try your recipe, fried Vietnamese spring rolls. Actually my mom's Dad and Mom are Vietnamese but Myanmar citizen after the second world war. I still memorized , when grandpa came back from Hanoi, his first visit to home town last 20 years ago, I learned from him how to make fried Vietnamese spring rolls in the kitchen. Thank you grandpa for your own recipe.
For my Vietnamese spring rolls I use rice paper from China town not Viet sheets. Because the Viet rice sheet is more sensitive than Chinese when deep fry in the hot oil.
500g minced Pork or chicken breast
1 pack(40g) glass noodles
50g black mushrooms
20 or 25 rice paper wrap
sunflower oil for deep fried
1.Separately soak the glass noodle and black mushrooms in the hot water5mins .
2.Seieve the glass noodles. Clean mushrooms cut into pieces and set aside.
3.Mix all the ingredient inalarge bowl thoroughly and set aside for marinate .
4.Spoon the meat mixer in the rice paper and deep fry in hot oil over medium heat for 2mins per side till golden brown.
5.Serve hot with lettuce, spring onion, water spinach and any kind of you like.
For Dipping Sauce (Its my grandpa recipe too) :
7 red chili, chopped
2 stocks Coriander leaves, chopped
slice gingeralittle
a pitch sugar
1 Tbsp Cantonese Suki sauce with sesame seeds
ဒီပို့စ်ကစပြီး နောက်ပိုင်း ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် International အားလုံးဖတ်လို့ နားလည်အောင် Recipe တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုပါ ရေးပေးပါမယ်....။ ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်စာကို သိပ်မကျွမ်းပါဘူး အမှားအယွင်းလေးတွေတွေ့ရင် ကော်မန့်မှာပြင်ဆင်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်...။
ကျွန်မ ဗီယက်နမ် ကော်ပြန့်ကြော်နည်းကိုအရင်က တင်ဖူးခဲ့ပါတယ်...။ ခုတခါတော့ Family Recipe ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အဖိုးဆီက အမွေရထားတဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးကို မှတ်မှတ်ရရ ပြန်ထည့်ချင်တာကြောင့်ပါ...။
ကျွန်မ အဖိုးသင်ပေးခဲ့တဲ့နည်းနဲ့ ဗီယက်နမ်ကော်ပြန်ကြော်ရင် ဘယ်တော့မှ ဗီယက်နမ်ကော်ပြန့်ရွက်ကို မသုံးဘူး..။ ဗီယက်နမ်ကော်ပြန့်ရွက်က ကော်ပြန့်စိမ်းလုပ်စားတာလောက်ပဲသင့်လျော်တယ် ကြော်စားရင် သူကပါးပြီးတူးမြန်လို့ တရုတ်တန်းဈေးထဲက ကော်ပြန့်ရွက်ကိုပဲ ကျွန်မသုံးလေ့ရှိတယ်..။ ခုတခါကတော့ ကျွန်မ Market Place က၀ယ်လာတဲ့ စမူစာလုပ်တဲ့ လေးထောင့်အရွက်ကြီးကိုသုံးထားပါတယ်..။
၀က်/ကြက် ကြိတ်သား ၅၀၀ဂရမ်
ကြက်ဥ ၃ လုံး
ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းဆီ
ကော်ပြန့်ရွက် ၂၀/၂၅ ရွက်
၁) ကြာဇံနဲ့မှိုကို ရေနွေးနဲ့သပ်သပ်ဆီ ငါးမိနစ်လောက် စိမ်ထားပါ..။
၂) ကြာဇံကို ရေစစ်ထားပြီး မှိုကိုရေဆေးသန့်စင်ပြီး ပါးပါးမျှင်မျှင်လေးတွေလှီးထားပါ..။
၃) ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဇလုံတစ်ခုတွင်ရောသမနယ်ပြီးနှပ်ထားပါ..။
၄) ကြော်ခါနီး ကော်ပြန့်ရွက်ပေါ် အသားနှစ်တစ်ဇွန်းမောက်မောက်ခပ်ထည့်သေသပ်စွာလိတ်ပြီး ဆီဆူဆူလျှင် မီးလျှော့ပါ ။ မီးအေးအေးနှင့်၂မိနစ်ခန့် သို့မဟုတ် ရွှေ့ရောင်သန်းလာသည်အထိကြော်ပေးပါ..။
၅) ဆလပ်ရွက်၊ ကြက်သွန်မှိတ်၊ သင်ထားပြီးသားကန်ဇွန်းရိုးတို့နဲ့ ပူပူနွေးနွေးသုံးဆောင်ပါ..။
ကြက်သွန်ဖြူ ငါးတက် ဓါးပြားရိုက်နုတ်နုတ်စင်း
ငရုတ်သီးအနီတောင့် (ရ)တောင့် ပါးပါးလှီးနုတ်နုတ်စင်း
ငါးငံပြာရည် ၂ ဇွန်း
နှမ်းစေ့တွေပါတဲ့ တရုတ်ကန်တုံဆူကီဆော့ တစ်ဇွန်း
တကယ်တမ်း ဗီယက်နမ် ကော်ပြန်အချဉ်ရည်က ကြက်ဖငရုတ်ချိုရည်နဲ့ မြေပဲဆံထောင်းလောက်နြဲ့ပီးတာ အခုစပ်တဲ့အချဉ်ရည်ကတော့ ကျွန်မ အဖိုးရဲ့ ကိုယ်ပိုင် recipe ပါ..။ ကော်ပြန့်ကြော်ကို ကပ်ကြေးနဲ့တစ်လုတ်စာလေးတွေ ဖြတ်ပြီး ဆလပ်ရွက်နဲ့ထုပ် အချဉ်ရည်လေးဆမ်းပြီး ပလုပ်ပလောင်းနဲ့ မြိန်ယှက်စွာ စားသုံးကြည့်ပါ...။ မှိုကြာဇံနဲ့အသား ရောထားတဲ့အစာထဲမှာ ကြက်ဥပါလို့ ၀ါးလိုက်ရင်နူးညံ့ပြီး ငရုတ်ကောင်းနံ့လေးမွှေးနေရော ...။ စမ်းလုပ်ပြီးစားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်...။
တစ်ခုပြောချင်သေးတယ် တချို့တွေကျွန်မတွေ့ဖူးတာ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ချင်းမစားကြတဲ့ သူတွေရှိတယ်..။ ဒီလိုလူတွေဆိုရင်တော့ ကျွန်မကြော်တဲ့ ကော်ပြန့်ကြော်ကို စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး...။ ကြော်ပြန့်ထဲမှာက ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ရဲ့ အနံ့နဲ့အရသာကို အဓိကထားပြီး အချဉ်ရည်မှာတော့ ချင်းပါနေလို့ပါ..။ ချင်းမထည့်လည်းရပေမယ့် ဆီကြော်တွေစားတဲ့အခါ အစာမကြေမှုပြဿနာအတွက် လူတိုင်း ချင်းတော့စားပေးသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်...။
Posted by Cameron at 10:52 No comments: